कक्रिएको ढुकुर – मझेरी डट कम
बिहेगरेको ४ वर्ष भो । छोराछोरी छैनन् । बुढी छे राम्री र कामकरीली । घरधन्दामा ब्यस्त हुन्छे । गाई पनि पालेको छ एउटा । चियाबारीमा पनि काम पनि गर्छे । बिनोदेले किन हो आफ्नो नाम मनन परेर हो या आमिर खानको फ्यान भएर हो आफ्नु नाम बिनोद नभनेर राजा राखेको छ । राजा हिन्दूस्थानी रिलिज भएपछि राखेको नाम । घरको अगाडिपट्टि रंगीन बोर्डमा पनि लेखेको छ “राजा टेलर्स”।
खासमा भन्ने हो भने, अल्छीको चै राजा छ । सुत्ने । काम नगर्ने । गाउँ डुलिरहने आदि । कसैले लुगा छेकाएर गएको छ भने २ महिनामा पनि उसको लुगा रेडी हुदैन । रक्सी कति खान्छ भने – बिहानै उसकोमा पुग्यो भने एकहातमा बिंडी र अर्को हातमा सिसाको ग्लासमा हल्का सेतो पन्चामृत त हुन्छ नै । “के हो बिनोद दाइ बिहानै शुरु गरिएछ त !” भन्यो भने “त्यो मु* दिलकुमारेकोबाट हिजो सुंगुर ल्याएर खाको कस्तो पेट बिग्रियो भने… त्यै भ’र हल्का लाको,” भन्थ्यो ।
बुढी संधै किचकिच गर्थी । अल्छे भो, काम ढिलो गर्यो या त कामै गरेन भनेर । काम नगरे पनि बिनोदे मिठो मसिनो खानुपर्ने मान्छे । तर कमाइ छैन । खाने बेलामा जैल्यै बुढीसँग सोध्थ्यो, “के पकाइस् सब्जी आज?”
“के हुनु उही गुन्द्रुक ।”
“दिक्क लाउँछे, खालि गुन्द्रुक नपका त ।”
“कमाऊ न राम्रो, गीतै मात्र सुनेर नबस । दिनैपिछे मासु खान पाउँछौ ।”
“लु भो भो, नकरा, भित्र जा ।”
सधैं जस्तो हुने बार्तालाप हो यो । चर्को स्वर सुनिए पनि माक्क मुक्क चै भएन त्यो घरमा ।
एकदिन त्यसै गरी बिनोद बिहानै उठ्यो पसलपट्टि छिर्यो, आँङ तान्यो, पाद्यो र गीत लगायो – ”यारा ओ यारा मिल्ना हमारा जाने क्या रंग लाएगा …।”
जाडो जाडो दिन थियो । एकछिन केके सोच्यो अनि लाग्यो गाउँतिर । चिया ढुक्न । डम्म हुस्सु लागेर यीं को तिँ नदेखिने भएको थियो ।
गाउँ पसेर डेसरेको बाउकोमा चिया खायो । रक्षाको बाउकोबाट एक दुई वटा पुराना लुगा खुट्न भनेर बोक्यो र त्याँ पनि दुधको चिया खायो । १/२ घन्टा ओल्लो घर पल्लो घर गरेरै बितायो । २ घराँ हल्का मदिरा पड्कायो । बिहानै मदिरा हान्छ भन्ने थाहा पाएकाले नसोधी खान दिन्छन् । बदलामा ऊ लुगा खुट्दिन्छ ।
‘आजलाई भयो’ भनेर सुसेल्दै बाटो लाग्यो, बिनोद ।
जाडो उस्तै थ्यो । हुस्सु लागेकै थियो । यस्सो हिंड्दै थियो अलि मास्तिर गोलाईमा एउटा ढुकुर नचट्पटाई निदाए जस्तो भएर बसेको देख्यो । टक्क अडिएर एक छिन हेर्यो अनि सानु आवाजमा “हा” भन्यो । ढुकुर चल्मलाएन । फेरि अलि साह्रो आवाजमा “हा…” गर्यो । ढुकुर जाडोले कक्रिएको थियो, चल्मलाएन ।
‘मरेको त हैन’ सानु आवाजमा बोल्दै बिनोदेले एउटा सानु ढुङ्गा टिपेर फ्याट्ट हान्यो र फेरि “हा…” गर्यो । हल्का एउटा खुट्टा उठाएर यस्सो जीउ मात्रै हल्लायो ढुकुरले ।
बिनोदेले “यस्किमा…” भन्दै खुरुरुरु कुदेर ढुकुर टपक्क हातमा टिप्यो । च्याप्प काखीमा च्याप्यो र फेरि सुसेल्दै लाग्यो घरतिर । घर नपुग्दै वरैबाट करायो बिनोदे –
”कल्पना… ए कल्पना… !”
घरतिरबाट उत्तर आएन । फेरि चिच्यायो, ”ओए कल्पना, तेस्कीमा कल्पे ओई कल्पे…!”
झ्यालबाट एस्सो मुन्टो निकालेर बुढीले हेरी र कराई, “किन मोर्न खोज्छौ ए, के भो ?”
“भात सब्जी पकाइस्?”
“अँ पकाएँ । तिम्लाई गाउँ डुल्दै ठिक छ । म चै के घराँ के कोट्याएर बस्नु नि ?”
“नकरा ! भो, सब्जी के पकाइस् ?”
“तिम्ले बंगुर ल्याईदेका छौ होला नि,मिठो खानलाई त ।”
“बढी नबोल्, सब्जी के पकाइस् त्यो भन् ।”
“के पकाउनु र उही गुन्द्रुक ।”
“त्यसो भए त्यो फ्याँक् ।”
“गुन्द्रुक फ्याकेर चै के खान्छौ नि फेरि?”
“फ्याँक् भनेपछि फ्याँक् न ।”
“ल हेर के भो आज बुडोलाई?”
“म आऊँ कि फ्याँक्छस् ए”
परै देखि कराउँदै कराउँदै अब बिनोदे घरको आँगनमै पुग्न लागेको थियो । बुढोले क्यै शिकारै पो गरेछ कि क्याहो भनेर बुढीले गुन्द्रुक झ्यालबाट मल खाडीतिर हुत्त पारी । अनि नजिकै आइपुगेको बुढोलाई सोधी, “खै के ल्यायौ र गुन्द्रुक फ्याँक्न लायौ?”
बिनोदेले काखीमा च्यापिराखेको ढुकुर हत्केलामा राखेर देखायो
“यी हेर्! ढुकुर,” ढुकुर भुर्रर उँड्यो ।
जाडोले कक्रिएर बाटोमा बसेको ढुकुर बिनोदेले काखी च्यापेर ल्याउँदा काखीको न्यानोले तंग्रेछ । पंख फड्फडाएर उँड्यो । बिनोदे खिस्रिकै भयो र लामो निस्वास फ्याँक्दै सानु र नम्र स्वरमा भन्यो- “बुढी! गुन्द्रुक फ्याँकी नै सकिस्?”